Sida Algorithm-ka LinkedIn uu u Shaqeeyo iyo Sida Loogu Shaqeeyo | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida Algorithm-ka LinkedIn uu u Shaqeeyo iyo Sida Looga Dhigo Inuu Ku Shaqeeyo
Sida Algorithm-ka LinkedIn uu u Shaqeeyo iyo Sida Looga Dhigo Inuu Ku Shaqeeyo
Algorithmiyaha LinkedIn wuxuu u janjeeraa inuu ku dul duulo radar-ka hoostiisa - u badbaadi #broetry blip sannadkii hore. Laakiin ma aha war la'aan.
Labadii sano ee la soo dhaafay, cusbooneysiinta algorithm-ka LinkedIn ayaa kicisay in ka badan 50% korodhka dhaqdhaqaaqa fayraska. In ka badan laba milyan oo qoraalo, fiidiyowyo, iyo maqaallo ah ayaa hadda la sifeeyay, la kala saaray, laguna soo bandhigay quudinta 645+ milyan ee xubnaha LinkedIn.
Maxaa keenay kor u kaca algorithmic-ku wado? Sida laga soo xigtay Pete Davies, agaasimaha sare ee maamulka alaabta LinkedIn, mantra ee quudinta waa "Dadka aad taqaan, ka hadlaya waxyaabaha aad danayso." Si kale haddii loo dhigo, Algorithm-ka Linkedin ayaa mudnaanta siiya isku-xirnaanta shakhsi ahaaneed ee ku salaysan danaha.
Mabda'a hagitaanku waa mid sahlan aragti ahaan iyo ficil ahaan, ugu yaraan markaad fahamto sida algorithm-ka LinkedIn u shaqeeyo. Baro calaamadaha iyo filtarrada saameeya si aad uga dhigto mid adiga kuu shaqeeya.
Bonus: Soo deji hage bilaash ah taasi waxay tusinaysaa 11ka tabo ee kooxda warbaahinta bulshada ee Hootsuite ay adeegsadeen inay ka koraan dhagaystayaashooda LinkedIn 0 ilaa 278,000 oo raacsan.
Sida algorithm-ka LinkedIn uu u shaqeeyo
Algorithm-ka LinkedIn wuxuu leeyahay laba hadaf oo aasaasi ah:
Si loo kala hormariyo nuxurka khuseeya
Si kor loogu qaado hawlgelinta
Ku habboonaanta trumps soo dhawaaynta, taas oo ah sababta quudinta bogga hoyga si caadi ah loogu dejiyo qoraallada "sare". Laakiin xubnuhu wali waxay haystaan ​​ikhtiyaarka ah inay u beddelaan qoraallada " dhawaa"
Kahor cusboonaysiinta ugu dambeysay (2019), LinkedIn waxay ogaatay in algorithm ay si badheedh ah u abuurtay "qalabka echo superstar." Isticmaalayaasha Mega-sida Richard Branson waxay si fudud ugu tarjumi karaan caannimada fayraska. Laakiin, celcelis ahaan isticmaalayaasha ayaa ku adkeyd in ay helaan dareenka.
Waxay ahayd loop qani ah oo heersare ah, kaliya qiyaas doolarka lagu beddelayo jecel, faallooyinka, iyo faallooyin kale oo bulsheed. Isticmaalayaasha celceliska ah waxay ahaayeen kuwo aad u yar inay helaan isdhexgalka, wayna ku yaraadeen dhiirigelinta inay dhajiyaan.
Si wax looga qabto kala duwanaanshiyaha, LinkedIn waxay cusboonaysiisay algorithm si ay u tusto fariimaha xubnaha ee dadka ay dhab ahaantii garanayaan. Iyo nuxurka la xidhiidha mawduucyada ay danaynayaan (maadaama labadoodu aanay daruuri ahayn inay labada dhinac is-dhaafsadaan).
Isbeddelkani waxa uu kordhiyaa suurtagalnimada is dhexgalka iyo fursadaha abuurista waxyaabo badan iyo ka-qaybgal badan oo hoos u dhaca khadka. Waxay u beddeshaa wareeg-celinta diidmada mid wanaagsan.
Tobanaan kun oo boosteejo ah ayaa la abuuraa ilbiriqsi kasta. Laakin, algorithm-ka-barashada mashiinka-LinkedIn waxa loo farsameeyay in uu si degdeg ah u kala saaro, u dhaliyo,iyo darajo waxa ku jira oo ku salaysan calaamado kala duwan.
Calaamadaha darajada 3 ee ugu sarreeya ee algorithm-ka LinkedIn
Algorithm-ka 'LinkedIn algorithm' wuxuu isticmaalaa calaamadaha soo socda si uu u shaandheeyo oo loo kala sareeyo qoraallada ka muuqda quudinta xubnaha.
1. Xiriirada shakhsi ahaaneed
Waxaa laga yaabaa inaad raacdo Oprah Winfrey dhanka Linkedin, laakiin fursada inaadan iyada shakhsi ahaan u garaneynin. Algorithm-ka cusub ee LinkedIn ujeedadiisu tahay in la bixiyo xidhiidhada gaarka ah miisaan badan.
Si loo go'aamiyo qoraalada sida gaarka ah ula xiriira xubnaha, LinkedIn waxay tixgelisaa calaamadaha muuqda iyo kuwa cad. Waxay tixgalinaysaa cidda aad sida tooska ah ula falgashay, faallooyinka, wadaagga, iyo falcelinta. Waxa kale oo ay tixgelisaa macluumaadka profiles, sida danaha iyo xirfadaha, iyo xubnaha la shaqeeya, iyo calaamadaha kale.
2. Xidhiidhka dulsaarka
Waxaa laga yaabaa inaad shakhsi ahaan ku xiran tahay qof, laakiin taasi macnaheedu maaha inaad ku raaxaysato isla nuxurka. Sababtan awgeed, algorithm-ka LinkedIn wuxuu cabbiraa xiriirka boostada ee danaha qof iyadoo ku saleysan kooxaha ay ku jiraan, iyo hashtagyada, dadka, iyo boggaga ay raacaan.
Marka loo eego barta Injineerinka ee LinkedIn, algorithmamka sidoo kale wuxuu eegaa luqadda boostada, iyo shirkadaha, dadka, iyo mowduucyada lagu sheegay.
3. Suurtagalnimada ka-qaybgalka
Is dhexgalka ayaa fure u ah guusha waxqabadka algoorithm. Algorithmamka LinkedIn ayaa qaybtan u kala qaybisa laba marxaladood.
Marka hore algorithmisku wuxuu qiimeeyaa suurtagalnimada inaad wadaagto, faallo ka bixiso, ama ka falceli doonto boostada. Waxa laga yaabaa inay tan ku cabbirto iyadoo lagu salaynayo nuxurka aad jeclaatay oo aad la wadaagtay wakhti hore, iyo sidoo kale cidda aad inta badan la falgasho. LinkedIn waxay ugu yeedhaa horumarintan ujeeddooyinka badan.
Marka labaad, sida LinkedIn u dhigayo, "qaabku wuxuu sidoo kale ku xisaabtamayaa jawaab celinta waqtiga ku habboon abuurayaasha nuxurka." Si kale haddii loo dhigo, ka dib marka boostada la daabaco, sida ugu dhakhsaha badan ee ay u bilaabato isdhexgalka, waxay u badan tahay LinkedIn inay ku darto quudinta dadka kale.
Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in arrimahan ay waxyar ka siman yihiin calaamadaha algorithm ee Instagram.
Talooyin 8 ah oo ku saabsan sida loo "garaaco" algorithm-ka LinkedIn
LinkedIn aad ayuu u wada ogyahay in xubnaha qaar ay doonayaan inay ciyaaraan ama dib u rogaan algorithm-ka. Sababtan awgeed, shirkadu waxay bixisay talooyin iyo hababka ugu wanaagsan, kuwaas oo halkan lagu soo daray, oo ay la socdaan dhowr kale oo aniga ah.
1. Noqo mid habboon
Si fudud ayaa loo odhan karaa, sax? Waxaa jira dhowr siyaabood oo abuurayaashu ay u eegi karaan ku habboonaanta.
Marka hore waxa jira xeerka muhiimka ah: Ogow dhagaystayaashaada. Ku billow samaynta cilmi-baadhis dhamaystiran oo dhegeysteyaal ah. Isticmaal falanqaynta, intel ee goobahaaga kale, ama xataa dhagaystayaasha tartamaya si aad u dhisto shakhsiyad, garaaf danaha, iyo aad u hesho faham wanaagsan oo ku saabsan waxa dhagaystayaashaadu xiisaynayso. U isticmaal natiijooyinkan sidii dhibcaha bilowga ah ee xeeladaha suuq-geynta LinkedIn.
Xidhiidhka ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa qaababka, sidoo kale. Xubnaha LinkedIn waxay door bidaan inay la falgalaan warbaahinta qani ah. Qoraalada sawirada leh waxay helayaan faallooyin laba jibaar ka badan kuwa la soo dhejiyo, fiidiyowyaduna waxay shan jeer uga dhow yihiin in faallooyinka la helo. Guud ahaan fiidiyowyada LinkedIn waxay kasbadaan ka-qaybgal saddex jeer ka badan qoraallada qoraalka-kaliya.
Adigoo isticmaalaya qaabab caan ku ah xubnaha LinkedIn, hal-abuurayaashu waxay u badan tahay inay kasbadaan dhibco labada tiir ee "xiriirka xiisaha" iyo "ixtimaalka ka-qaybgalka".
2. Kor u qaad qoraaladaada
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu kordhin karo ka-qaybgalka qoraalladaada waa in la kordhiyo tirada dadka arki doona. Waxaa jira dhowr tabo oo hal abuurayaashu ay isticmaali karaan si ay uga helaan soo jiidasho dheeraad ah LinkedIn. Ku calaamadee shirkadaha iyo xubnaha ay khusayso, u isticmaal ereyada muhiimka ah si xeeladaysan, oo ku dar hashtagyada khuseeya.
Hashtag calaamadeysan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay halkan ku leeyihiin awood sare. Haddii aad abuurto hashtag mudan in la raaco, jaanisyada algorithm-ka ayaa soo saari doona dhejisyada u adeegsada kuwa raacsan hashtag. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah Lyft's #LifeAtLyft, Nike's #SwooshLife, ama Adobe's #AdobeLife. Google's #GrowWithHashtag wuxuu abuuraa bulsho ka kooban in ka badan 2,000 oo tababarayaal kuwaas oo ku xidhi kara oo ku wadaagi kara khibradaha goobta. Si aad u hesho tilmaamo dheeraad ah oo calaamadaynta ah, akhri hagahayaga hashtag ee LinkedIn.
Dhammaan xayeysiisyadu uma baahna inay ku dhacaan LinkedIn. Haddii aad u malaynayso in boostada dhow ay xiiso u leedahay shaqaalaha ama macaamiisha, ku wadaag Slack ama e-wargeyskaaga. Tani waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu mashquuliyo xubnaha LinkedIn ee aan firfircoonayn macluumaadkaaga. Taa baddalkeeda, ka-qaybgalku wuxuu hagaajin doonaa darajadaada LinkedIn algorithm. Waa guul-guul
3. Dhiirigelinta ka qaybgalka
Algorithm-ka 'LinkedIn algorithm' waxa uu abaalmariyaa ka-qaybgalka-gaar ahaan qoraallada dhiirrigeliya wada sheekaysiga. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo wada hadalka waa su'aal. Weydii dhagaystayaashaada inay kula wadaagaan ra'yigooda ama fikradahooda. Soo bandhigida su'aalaha saxda ah waxay ku dhejisaa sumaddaada hoggaamiye fikradeed waxayna ku siinaysaa fursad aad wax badan uga barato danaha dhagaystayaashaada.
Dabcan, haddii aad rabto in xubnaha LinkedIn ay kula falgalaan, hubi inaad soo celiso wada hadalka. Siduu Pete Davies u sharaxay, ""Sida qaanuunka suulka ah, wada sheekeysiga wanaagsani waa dhab oo gadaal iyo gadaal wax dhisaya."
4. U tag niche ka soo horjeeda ballaaran
Taladani waxay si toos ah uga timaad LinkedIn. "Waxaan ka ognahay xogtayada in xubnuhu ay aad u xiiseynayaan inay si qoto dheer uga hadlaan mawduucyada ay xiiseynayaan," ayuu yiri Davies. "Si joogta ah waxaan u aragnaa wada sheekeysi wanaagsan oo ku saabsan fikradaha niche."
Tani waa caqabad guud oo ku ah shirkadaha-gaar ahaan kuwa bilawga ah-kuwaas oo ballan-qaaday inay beddelaan adduunka ama ay isbeddel ku sameeyaan warshadaha. Spare hyperbole oo door bideysa waxyaabo gaar ah oo la taaban karo. Hana iloobin tilmaanta #1: Noqo mid khusaysa.
Tani waxay khusayn kartaa dhammaan istiraatiijiyaddaada nuxurka, ilaa iyo hoos hashtagaha aad isticmaasho.
Qaado KLM. In kasta oo ay shirkaddu isticmaali karto hashtagyada caanka ah sida #travel, waxay inta badan doorataa sumado badan oo caan ah sida #aviation. Waa kala duwanaansho caqli-gal ah tan iyo markii #safarku ku xidho KLM kuwa leh qulqulatooyinka wanderlust-ka ee mararka qaarkood, halka #aviation-ku uu ku xidho diyaaradda saldhig waara oo #avgeeks ah.
Taas macnaheedu maaha inaad gabi ahaanba iska indho tirto hashtagyada guud, in kastoo. Soo hel dheelitirka saxda ah adiga oo aan xad dhaafin. LinkedIn waxay ku talinaysaa saddex hashtags max.
5. Ku dhaji wakhtiga saxda ah
Sida dhaqsaha leh ee jecel iyo faallooyinka u soo galaan, algoorithmamka sare ee LinkedIn ayaa u qiimeyn doona boostadaada. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu wanaajin karo isdhexgalka ayaa ah in la dhajiyo waqtiyada xubnaha LinkedIn ay online yihiin.
Sida laga soo xigtay xogta Hootsuite:
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo LinkedIn waa 7:45 subaxnimo, 10:45 subaxnimo, 12:45 galabnimo, iyo 5:45 galabnimo EST.
Maalinta ugu wanaagsan ee sumadaha B2B lagu dhejiyo LinkedIn waa Arbacada (oo ay ku xigto Talaadada).
Maalmaha ugu wanaagsan ee sumadaha B2C ee lagu dhejiyo LinkedIn waa Isniinta iyo Arbacada.
Hubi inaad ka gudubto natiijooyinkan falanqayntaada. Tusaale ahaan, haddii qayb muhiim ah oo ka mid ah dhagaystayaashaadu ay ku salaysan yihiin aag wakhti gaar ah, waxa laga yaabaa inaad hesho kala duwanaansho.
6. U dhis shabakadaada si xeeladaysan
Xidhiidhada iyo ku-xirnaanta ayaa ah arrimo muhiim ah marka ay timaaddo ka-noqoshada nimcada LinkedIn algorithm. Natiijo ahaan, kobcinta shabakad caafimaad qabta oo firfircoon waxay leedahay awood ay ku hesho abaal-marinno macquul ah.
Haddii aad maamusho profile shakhsi ama bogga LinkedIn, hubi inaad:
Buuxi astaantaada gaarka ah iyo boggaga sida buuxda ee aad awooddo, oo la socodsii iyaga.
Ku dar isku xirka (dadka aad taqaan, ama u malaynayso inay xiiso u yeelan doonaan inaad ka aragto wixii ku soo kordha).
Ku dhiiri geli shaqaalaha inay sheegaan inay ka shaqeeyaan shirkaddaada oo ay isticmaalaan hashtag-ga shirkadda.
Raac kuwa kale oo soo jiida kuwa raacsan (kuwa way ka duwan yihiin isku xirka LinkedIn).
Ka qayb qaado kooxaha LinkedIn, ama marti geli kuwaaga.
Sii oo hel talooyin.
Hubi in profile-kaagu yahay mid guud, si ay dadku kuu helaan, kuugu daraan oo ay u arkaan qoraalladaada.
Ku biir wada sheekaysiga oo si firfircoon uga qaybgal shabakada, guud ahaan.
Kor u qaad boggaga LinkedIn ee mareegahaaga iyo meelaha kale ee habboon (tusaale, bios-ka shaqaalaha, kaadhadhka ganacsiga, wargeysyada, saxeexyada iimaylka, iwm.). Dejinta URL-yada gaarka ah ayaa faa'iido u leh tan. Waxaad ka heli kartaa calaamadaha saxda ah halkan.
Tixgeli abuurista bogga Bandhigga LinkedIn.
7. Ku wanaaji falanqaynta LinkedIn
Haddii shay si fiican u shaqeeyo, ku celceli. Isticmaal LinkedIn Analytics ama Falanqaynta Hootsuite si aad u fahamto qoraallada ugu fiican iyo sababta. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay inaad soo dhejisay dhamaantood wakhti go'an. Mise, laga yaabaa in qoraal kastaa uu su'aal keenay? Si kastaba ha ahaatee, ogow oo isticmaal fikradahan si aad u nadiifiso istiraatijiyadda nuxurka LinkedIn.
8. Noqo qof gaar ah
Sida laga soo xigtay LinkedIn, xaqiiqadu waa furaha. "Wadahadal dhab ah oo ku saabsan khibradaha dhabta ah ayaa dhalinaya wada hadal ka sii wanaagsan oo qoto dheer," ayuu yidhi Davies. "Wadahadalka wanaagsan, isna, wuxuu horseedaa bulsho xooggan iyo isku xirnaan."
Ka soo qaad cod calaamad ah oo saaxiibtinimo leh oo la soo dhawaan karo. Akoonada ku jiida khadka shirkadda ama adeegsada jargon shirkadeed oo aad u badan ayaa laga yaabaa inay ka horjoogsato xubnaha LinkedIn inay la falgalaan. Noqo mid dhab ah oo la isku hallayn karo, dhagaystayaashaaduna waxay u badan tahay inay ku soo celiyaan isla sidaas oo kale.
Si fudud u maamul boggaga LinkedIn oo ay weheliyaan kanaalada kale ee bulshada addoo isticmaalaya Hootsuite. Hal goob oo keliya waxaad ka jadwalaysan kartaa oo wadaagi kartaa waxa ku jira- oo uu ku jiro fiidyow- oo aad ka qaybgeli kartaa shabakadaada. Isku day maanta.
Sida loogu daro avatar iMessage gaar ah gudaha iOS 13
Sida loogu Wado Taraafiko Dheeraad ah iyadoo la kordhinayo Wicitaan Ficil ee YouTube